Taariikhda My Butros » Ma Online Dating Choice wanaagsan?
Last updated: Jan. 26 2020 | 3 min akhri
Shukaansi Online ayaa si deg deg ah u noqdaan tiro ka mid ah doorashada dadka kelida ah in ay la kulmaan dadka taariikhda. The warshadaha shukaansiga online ayaa had iyo goor sii kordhaya ee ay caanka iyo sabab wanaagsan. Haddii aad ku jirtid xayndaabka ku saabsan in ay isku dayaan baxay online shukaansi sida hab lagu heli hindiga, ka feker shantan sababo fiican sababta oo isticmaalaya adeega shukaansiga online waxaa laga yaabaa in doorasho wanaagsan idiin.
1. Choice Greater
A hal isticmaalka adeeg shukaansiga online leedahay doorasho wanaagsan oo kulan ku iman kara badan hal ah iyaga oo adeegsanaya hab shukaansi dheeraad ah oo ku dhaqanka sida makhaayad ama kafeega dukaan degaanka. Iyada oo shukaansi online laguu oggol yahay inaad caleenta iyada oo dhowr profiles raadinaya qof in gaar ah. Marka aad u jiheysan dukaan geeska qaxwaha oo aad kaliya leedahay fursad shirka haystaa sacab muggiis oo qof kali ah, iyo mararka qaarkood marnaba la kulmo qof dhan. Iyada oo shukaansi online aad si weyn ugu kordheen fursada helo qof oo xiiso aad.
2. Hel Maxay Rabaan Waxaad
Adeegyada shukaansiga online badan ayaa kuu ogolaanaysa inaad baadhaya profiles ku salaysan weedho key gaar ah ama iyada oo loo marayo habka shaandhaynta. By kaliya ku heysa profiles in haysannaa hadalka “Christian” ama “taageere sports” iyaga oo ku, aad waxaana ay fursad u kordhay helo qof in aad wadaagtan aragtidaada iyo danaha iyo Goynay Cidhibta kuwa aan. Marka aad la kulanto nin ama naag at baar, ma aha wax aad ee sheegaya xaq u off fiidmeerta haddii ay yihiin Christian ama diin laawe, taageere San Diego xeedho ama haddii ay u arkaan in kubada cagta waa isboorti rabshado. Adiga oo isticmaalaya hawlaha goobidda iyo baxayo ku saabsan adeegyada shukaansiga online in la aqoonsado taariikhda kooban ee kulan ka iman kara, aad baabiin karta waqti ku qaatay heysa profiles dadka in aadan la wadaagin danahaaga.
3. Info Personal joogi kartaa Private
Wax A weyn oo ku saabsan shukaansiga online waa ay magaciisa. Marka la bilaabo xiriir la yeelato qof aad ayaa loo soo jiita online, Qasab ma aha in aad bixiso wax informationÖnot shakhsi xitaa cinwaanka emailkaaga. Waxaad qaadan kartaa waqti aad si dhab ah u helaan in ay ogaadaan qofka ka hor bixinta macluumaadka shakhsiyeed sida lambarkaaga telefoonka, Si ka duwan noocyada kale ee dadka la kulmay. Haddii aad la kulantid qof at a kaalinta kelida ah, ay khasab kugu noqoto in aad iska bixin lambarka telefoonka aad si ay u sii joogteeyaan xidhiidhka, xataa haddii aad hadda uun la kulmay qofka oo aadan aqoon ku filan isaga ama iyada in ay ogaadaan haddii ay qabaan niyad wanaagsan.
4. Cabsi iyo Xishoodka waa la dhimi karaa
Haddii aad go'aansato in aad la xidhiidhid cid kastoo ay email aad qaadan kartaa waqti aad u ahaantii qorsheeyo waxa aad rabto inaad tiraahdo qofkaas la shukaansiga online. Haddii aad aragto qof ee qolka iyo isku day in aad u dhawaanina, mararka qaarkood neerfaha iyo fadeexad ka heli kartaa ugu wanaagsan ee aad ah. Waxaa laga yaabaa inaad ku Dhagarteen waxa aad oranayso, laakiin marka aad soo gaadho waxa dhan badalaa ugu sharxi soo socda oo afkiinna ka baxa. Iyada oo shukaansi online aad fadhiisan karo iyo inaad ku fikirto email, kuwaasi way akhrin badan jeer laba qof oo, iyo diri ogayn in aad adigu iskaa u muujiyeen sida ugu fiican ee aad awoodo. Awkwardness The bulshada in la imaan kartaa qof u dhowaanin on Daqsi in qofka waxaa gebi ahaanba la ciribtiray.
5. Waa mid ka mid ah oo ku saabsan One Experience
Baarka, kooxda, makhaayadda qaxwaha, ama kelida kale dhaqanka goobta kulanka, waa wax macquul ah in la xidhiidhay shaqsi ah la gaaray qof aad xiisaynayso. Waxaa jira tartan firfircoon ee dareenka ee kulannada bulshada iyo hal ku saabsan mid ka mid dhexgalka noqon karaa mid aad u adag tahay in la soo. Iyada oo shukaansi online waa xaq shakhsi tan iyo bilowgii. Waxaad xidhiidho mid ka mid ah email gaar ah ula sheekeysanaya qofka aad xiisaynayso oo ay awoodaan si ay u sameeyaan xiriir shakhsi xaq u off fiidmeerta, halkii ay ku tartami in qol ay ka buuxaan guys kale hal iyo gals dhan maqnaan ujeeddo isku mid.
Dadka kelida ah khaati leh goobta shukaansi dhaqameed, oo raadinaya isbedel, shukaansiga online waxaa laga yaabaa in jidka loo tago. Waxa aad la kulmi kartaa dad badan oo dano la mid ah oo aan lala wadaagin macluumaadka shakhsiga ah iyo, aad mar ka heli profile ugu fiican, waxa aad sameyn kartaa xiriir shakhsi degdeg ah. Waxaa dhab ahaan waa isku day ah oo ku kacaya.